Sawiro:- Ciidanka NISA oo gacanta ku dhigay Koox Burcad ah - Awdinle Online
Ciidamadda Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka iyo Qaranka ee (NISA) ayaa gacanta ku soo dhigay 23-eedaysane oo loo haysto falal burcadnimo ah kuwaas oo dhibaato ku hayey shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha caasimadda Muqdisho.
Burcdda la soo qabtay oo la soo bandhigay ayaa waxaa la sheegay inxiliga habeenkii ah dadka ka furan jiray moobilada iyo waxay sitaan.
Ugu dambeyntii Sirdoonka NISA oo kaashanaya shacabka ayaa soo afjaray tuugada,iyaga oo u gudbiyay Maxkamadda Ciidamada si tallaabo looga qaado Burcaada.
Xaafada la tirsan degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa mararka qaar waxaa dhac ka geysta Kooxo hubeysan oo qaarkood la sheegay inay askar tihiin Ciidanka Dowladda,waxaana dadka Shacabka ay ay dacwad u gudbiyeen laamaha Amniga Soomaaliya.
Previous articleDEG DEG:-Xildhibaannada labada Aqal oo ansixiyay heshiiskii doorashada
Next articleMadaxweynaha Jubbaland oo War deg deg ah kasoo saaray heshiiska la ansixiyay